အသုံး ၀ င်သောကြံ့ခိုင်သောအနှိပ်အမြှုပ်လေး - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အရောင် မီးခိုးရင့်ရောင် ကောင်းကင်ပြာ အစိမ်းဖျော့ရောင် ဝါသော ခရမ်းရောင် ဇီးသီး Burgundy Black က ပြာသော စိမ်းလန်းသော လိမ္မော်သီး ပန်းရောင် ခရမ်းရောင်နု အနီရောငျ
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ ရုရှားပြည်ထောင်စု ပိုလန်
မီးခိုးရောင် / တရုတ် Sky Blue / တရုတ် အစိမ်းရောင် / တရုတ် အဝါရောင် / တရုတ် ခရမ်းရောင် / တရုတ် Plum / တရုတ် Burgundy / တရုတ် Black က / တရုတ် အပြာရောင် / တရုတ် အစိမ်းရောင် / တရုတ် လိမ္မော်ရောင်၊ တရုတ် ပန်းရောင် / တရုတ် ခရမ်းရောင် / တရုတ် အနီရောင် / တရုတ် ပန်းရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ရုရှား / က Black အဖွဲ့ချုပ်မှ ရုရှား / အနီရောင်ဖက်ဒရေးရှင်း လိမ္မော်ရောင်၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အပြာရောင် / ရုရှဖက်ဒရေးရှင်း အစိမ်း / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ခရမ်းရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ခရမ်းရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း Dark Grey / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း Burgundy / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အဝါရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း Sky Blue / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အစိမ်းရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း Plum / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အနက်ရောင် / ပိုလန် အပြာရောင် / ပိုလန် Burgundy / ပိုလန် ခရမ်းရောင် / ပိုလန် နီ၊ ပိုလန် အဝါရောင် / ပိုလန် ပန်းရောင် / ပိုလန် ခရမ်းရောင် / ပိုလန် အစိမ်းရောင် / ပိုလန် လိမ္မော်ရောင်၊ ပိုလန် Dark Grey / ပိုလန် အစိမ်းရောင် / ပိုလန် Sky Blue / ပိုလန် Plum / ပိုလန်
အသုံးဝင်သောကြံ့ခိုင်သောအနှိပ်အမြှုပ်ကြိတ်စက် - Sky Blue / China backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: EVA နှင့် ABS
သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ကြံ့ခိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေး
ပုံစံ: အနှိပ် roller, Pilates မြှုပ် roller
Size ကို 1: 30cm * 9.5cm
Size ကို 2: 30cm * 8cm
အလေးချိန်: 410 ဂရမ်နှင့် 330g
အထူ - 13 (mm)
အရောင်: အပြာရောင်၊ အစိမ်း၊ အနက်ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်
လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီ fascia ပူနွေးခြင်းနှင့်ဆန့်။
ကြွက်သားအပန်းဖြေခြင်းနှင့် beautification ကွေး။
Fantastic ထုတ်ကုန်။ ပစ္စည်းသည်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကြီးမားသောအရောင်နှင့်သိပ်သည်းဆဖြစ်သည်။ အကြံပြုပါသည်
ကုန်ပစ္စည်းများမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိလာသည်၊ ၎င်းကိုပို့ဆောင်ရန်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါ အဆင့်မှာအရည်အသွေး!
တံခါးကို4ရက်ကြာမှရောက်လာသော။ အရည်အသွေးကောင်း